धनी व्यक्तिबाट सिक्नै पर्ने ‘लोभलाग्दा सात राम्रा बानीहरु’ ~ Banking Khabar
सिकाइ : यसबाट हामीले के सिक्नुपर्छ भने मासिक रूपमा तिर्नुपर्ने किस्ता तिर्न सक्ने सामथ्र्य छैन भने ऋण लिएर घर खरीद गर्नु हुँदैन । ऋण लिएर किनेको घर होस् वा भाडाको, घरमा आफ्नो कमाइको ४० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्नु हुँदैन । त्यस्तै आम्दानीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी गाडी कर्जामा पनि खर्च गर्नु हुँदैन । छिमेकीको बराबरी गर्ने होडमा खर्च बढाउन हुँदैन ।
२. लुगा, जुत्ता र खानेकुरामा कम खर्च गर्छन्
स्मार्ट धनाढ्यहरू डिजाइनर लुगा, ब्राण्डेड जुत्ता र एक्सेसरिजमा धेरै नै कम खर्च गर्छन् । उनीहरूले आफ्ना छोराछोरीका लागि समेत उही नियम चलाएका हुन्छन् । उनीहरू भविष्यमा आफू र आफ्ना छोराछोरीलाई धनी बनाइराख्ने किसिमका कुरामा खर्च गर्छन् । हाल आफू धनी भइरहेको जस्तो देखाउने वस्तु खरीद गर्नबाट उनीहरू टाढै बस्छन् । यसैकारण इन्फोसिसका संस्थापक नारायण मूर्ति र बलिउड सुपरस्टार रजनीकान्त दैनिक जीवनमा धोती–कुर्ता नै लगाउँछन् ।
सिकाइ : लुगा तथा कपडा खरीदमा कमाइको ३ देखि ५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्नु हुँदैन । त्यस्तै छुट्टी मनाउने क्रियाकलापमा र खानेकुरामा क्रमशः ५ प्रतिशत र १५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्चिनु हुँदैन । लुगामा र मूल्य क्षय हुँदै जाने कारजस्ता वस्तुमा खर्च गर्नुभन्दा भन्दा पनि आफ्नो सम्पत्ति बढाउँदै लैजाने खालको कुरामा लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
३. पहिला बचत र लगानी गर्छन् अनि मात्र खर्च गर्छन्
वफेटले भनेका छन्, ‘आफूलाई आवश्यक भइनसकेको वस्तु खरीद र्गयौ भने भने छिट्टै नै आफूलाई आवश्यक भइरहेको वस्तु विक्री गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’ अधिकांश धनाढ्यले आफ्नो आम्दानीको कम्तीमा पनि २० प्रतिशत बचत र लगानी गर्छन् अनि बाँकी रहेको रकम मात्र खर्च गर्छन् । आफ्नो कमाइ थोरै छ भने पनि बचत गर्ने बानी भयो भने त्यसले भविष्यलाई सुरक्षित बनाउन सहयोग गर्छ र सेवानिवृत्त हुने बेलामा दुःख गर्नुपर्ने अवस्थाबाट बचाउँछ । पहिले बचत गर्नुपर्छ र केही रकम अनपेक्षित आपतविपतका लागि पनि छुट्ट्याउनु पर्छ ।
सिकाइ : लगानीलाई एउटा बानीका रूपमा विकसित गर्नुस् । यसलाई स्वचालन नै बनाउनुस् । लगानीमा जाने रकम तपाईंको बैङ्क खाताबाट महीनाको पहिलो हप्तामै लगानीमा पुगोस् । ६ महीनासम्म मासिक खर्च पुग्ने रकम आपत–विपदको समयका लागि जोगाइराख्नुस् ।
४. अधिकांश धनीहरूले धेरै नगद बोक्दैनन्, उनीहरू क्रेडिट कार्ड चलाउँछन्
अधिकांश धनी व्यक्तिहरूले त्यति मात्र नगद बोक्छन् जति आफूलाई चाहिएको वस्तु खरीद गर्न पुगोस् । उनीहरू क्रेडिट कार्डलाई नै बढी प्राथमिकता दिन्छन् । क्रेडिट कार्डले बढी खर्च गराउँछ भन्ने भनाइ रहे पनि यी धनाढ्यहरू चाहिँ अनुशासनमार्फत खर्च जोगाउँछन् र क्रेडिट कार्डबाट खर्च गर्दा पाइने छूट र सुविधाको लाभ उठाउँछन् ।
सिकाइ : क्रेडिट कार्डको प्रयोग गर्दा आफूले कहाँ–कहाँ, के–के कुरामा खर्च गरेको हो, त्यसको रेकर्ड स्पष्ट हुन्छ । साथै यस्ता कार्डबापत पाइने छूट र सुविधा भनेको थप आम्दानी बराबरै हो । यसबाट पैसा चोरी हुने सम्भावना पनि घट्छ ।
५. उनीहरू सधैं छूट, कुपन र लागत घटाउने उपाय खोज्छन्
यो पनि खर्च घटाउने राम्रो बानीमध्येको एक हो । धेरैजसो धनी व्यक्तिहरू छूट, सेल, कुपन र पुरस्कार जस्ता अवसरको खोजीमा रहेका हुन्छन्, जसबाट उनीहरूले आफ्नो लागत र खर्च घटाउन सकून् । थोरै मात्र छूटले पनि ठूलो रकमको बचत हुन सक्छ । त्यस्ता व्यक्तिहरूले आफ्ना कर्मचारीले कार्यालयमा बत्ती बन्द गरेरनगरेको समेत निगरानी गर्छन् । किनकि उनीहरूलाई लागत कसरी घटाउने भन्ने कुराको राम्रो जानकारी हुन्छ ।
सिकाइ : कुनै पनि बिल तिर्न र टिकट बुकिङ गर्नका लागि पेटीएम् जस्ता मोबाइल एप्सको प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्ता एप्सको प्रयोग गर्दा नगद फिर्ता वा छूटको व्यवस्था हुन्छ । त्यस्तै कुनै यात्रा गर्दा पनि त्यसको शुल्कमा छूट दिने साइटहरूसँग सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।
६. मूल्यभन्दा गुणस्तरलाई बढी महत्त्व दिन्छन्
अधिकांश धनाढ्यहरूले कुनै वस्तु सस्तो हुँदैमा खरीद गरिहाल्दैनन् । उनीहरूको बुझाइमा राम्रो गुणस्तरको वस्तु धेरै लामो समयसम्म टिक्छ । घरमा प्रयोग हुने कुनै सस्तो सामान खरीद गरियो भने त्यसको मर्मत सम्भारमा धेरै पैसा खर्च हुन सक्छ अथवा त्यो बिग्रिएर छिट्टै नै त्यसको सट्टामा नयाँ सामान ल्याउनुपर्ने हुन सक्छ ।
सिकाइ : कुनै पनि वस्तु खरीद गर्नुभन्दा अगाडि त्यसको लागत र लाभबीच एक तुलनात्मक अध्ययन गरिनुपर्छ । त्यस्तै एकपटक वा दुईपटक मात्र प्रयोग हुने कुरा जस्तै– लुगा र महँगा खेलौनाहरू खरीद गर्नु हुँदैन ।
७. आम्दानीको थोरै प्रतिशत मात्र दान गर्छन्
अति धनाढ्यहरूले आफ्नो आम्दानीको एकदमै थोरै प्रतिशतमात्र दानमा दिने गरेको पाइएको छ । यसको उल्टो उता मध्यम वर्गीयहरूले चाहिँ ठूलो रकम दानमा दिन्छन् ।
सिकाइ : यसबाट के सिक्न सकिन्छ भने दान त दिनुपर्छ तर बचत र लगानीका माध्यमबाट आफ्नो भविष्य सुनिश्चित पारिसकेपछि मात्र । दान दिँदा पाइने कर छूटको समेत लाभ लिन सकिन्छ । एजेन्सी